तिन दिन सार्बजनिक बिदा ! – List Khabar
Home / समाचार / तिन दिन सार्बजनिक बिदा !
admin January 13, 2022 समाचार Leaveacomment 75 Views
कैलालीको कैलालरी गाउँपालिकाले माघी पर्वका अवसरमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । माघीलाई नयाँ वर्षका रुपमा मनाउने थारू समुदायलाई लक्षित गरेर कैलारी गाउँपालिकाले तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका सूचना अधिकारी यगम कलले बताए ।
‘यो गाउँपालिकामा थारू बाहुल्यता रहेको छ,’ उनले भने, ‘थारू समुदायले माघीसँगै १ माघदेखि नयाँ वर्षका रुपमा मनाउने हुँदा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो ।’
उनका अनुसार ३० पुस देखि २ माघसम्म सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । कैलारी गाउँपालिकाले गत वर्ष पनि तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा : हेर्नुहोस
अभिनेत्रीसमेत रहेकी तृणमूल कांग्रेस टीएमसीकी नुसरत जहाँले बिबाह नगरिकनै बच्चा जन्माएकी हुन्। बाबुको टुङ्गो नभएरै छोरा जन्माएपछि नुसरत तनावमा छिन्। अभिनेत्रीले एक छोरालाई जन्म दिएकी हुन्।
Previous काठमाडौं उपत्यकामा लागू भयो यस्तो नियम ,अटेर गरे कारबाही यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने नियम!
Next आज शुक्रबारको राशिफल : पुष महिनाको अन्तिम दिन यी राशिलाई अत्यन्तै शुभ